Isingeniso | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Noma ngabe amazwi akhulunywe nguNkulunkulu asobala noma ajulile ngokubuka ngamehlo, wonke ayiqiniso elisemqoka kakhulu kumuntu njengoba engena ekuphileni; awumthombo wamanzi okuphila lawo amenza ukuba aphile ngokomoya nangokwenyama. Anikeza lokho umuntu akudingayo ukuze aphile; izimfundiso zeBhayibheli ezingenakuphikwa inkolelo nomgomo wokuziphatha empilweni yakhe nsuku zonke; indlela, inhloso, kanye nenkambo okufanele adlule kuyo ukuze athole insindiso; lonke lelo qiniso kumele abe nalo njengesidalwa esiphambi kukaNkulunkulu; kanye neqiniso lokuthi umuntu kumele amesabe futhi amkhonze kanjani uNkulunkulu. Ayisiqiniseko esiqinisekisa ukuphila komuntu, ayisinkwa somuntu semihla ngemihla, nokuthi abuye futhi abe yisisekelo esiqinile esenza umuntu aqine futhi azimele. Acebile ngesiqiniseko sangempela seqiniso lobuntu obejwayelekile njengalokhu ephilwa yisintu esidaliwe, acebile ngeqiniso lelo ngalo isintu sikwazi ukukhululeka ekukhohlakalisweni kanye nasekubalekeleni izingibe zikaSathane, acebile ekufundiseni ngokungakhathali, ekugqugquzeleni, ekukhuthazeni, nasekududuzeni lokho uMdali akunikeza isintu esidaliwe. Ayisibani esiqondisayo nesikhanyisela umuntu ukuze aqonde konke lokho okungokuhle, isiqinisekiso esiqinisekisa abantu ukuthi bayophila futhi bafike ekuphatheni kwakho konke okulungileyo nokuhle, umbandela okuyiwo abantu, izigameko, nezinto ezilinganisekayo, kanye futhi nokwakha inkomba-ndlela eholela umuntu imqondise ensindisweni nasendleleni yokukhanya.
Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi UNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekumesabeni UNkulunkulu Nokudeda Kokubi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Kwethi “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana,” uNkulunkulu uveza amazwi Akhe esebenzisa uMoya. Isintu esidaliwe asinakuyifinyelela indlela akhuluma ngayo. Ngaphezu kwalokho, inqolobane nobuciko bamagama Akhe kuhle futhi kuyakhuthaza, alukho uhlobo lwencwadi yabantu olungathatha indawo yawo. Amazwi embula ngawo umuntu ashaya emhloleni, awanakuphikwa yinoma yiliphi ifilosofi, futhi enza bonke abantu baguqe ngamadolo. Njengenkemba ebukhali, amazwi ahlulela ngawo umuntu asika khona ngqo ekujuleni kwemiphefumulo yabantu, abashiya bengenandawo abangacasha kuyo. Amazwi aduduza ngawo abantu anomusa kanye nomusa wothando, anemfudumalo njengokwanga kukamama onothando, futhi enza abantu bazizwe bephephile kunanini ngaphambili. Into eyodwa ewuphawu olubalulekile ngala mazwi ukuthi, phakathi nalesi sigaba, uNkulunkulu akakhulumi esebenzisa isiqu sikaJehova noma uJesu Kristu, akasebenzisi futhi uKristu wezinsuku zokugcina. Kunalokho, usebenzisa isiqu Sakhe esiyifa—uMdali—ukhuluma futhi afundise bonke abamlandelayo nabasazomlandela. Kuhle ukuthi lesi bekuyisikhathi sokuqala kusukela ekudalweni uNkulunkulu akubhekisa kuso sonke isintu. Akukaze kwenzeke ngaphambili ukuthi uNkulunkulu akhulume nesintu esidaliwe ngaleyo mininingwane nangokuhleleka okukhulu. Yiqiniso, lesi bekuyisikhathi sokuqala ekhuluma okuningi kangaka, futhi isikhathi eside kuso sonke isintu. Kwakuyinto engakaze nakancane yenzeke ngaphambili. Ngaphezu kwalokho, la mazwi ayewumbhalo wokuqala owavezwa uNkulunkulu phakathi kwesintu embula ngawo abantu, wabaqondisa, wabahlulela, futhi wakhuluma ngezinhliziyo zabo, futhi ngokunjalo kwakungamazwi okuqala uNkulunkulu avumela ngawo abantu bazi izinyathelo Zakhe, indawo alala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNKulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, nokukhathazeka Kwakhe ngesintu. Kungashiwo ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala uNkulunkulu awakhuluma esintwini esezulwini lesithathu kusukela ngesikhathi sendalo, futhi kungokokuqala uNkulunkulu esebenzisa isiqu Sakhe esiyifa ukuze abonakale futhi aveze izwi lenhliziyo Yakhe esintwini ngaphambi kwamazwi.
Kucashunwe embhalweni othi “Isingeniso” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Indlela yokuphila akusiyo into engaba ekanoma ubani, noma into engatholwa yinoma ngubani kalula. Lokhu kwenziwa ukuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu kuphela, okusho ukuthi, uNkulunkulu kuphela onesiqu sokuphila, ayikho enye indlela yokuphila ngaphandle kukaNkulunkulu Uqobo, ngakho-ke uNkulunkulu kuphela owumthombo wokuphila, futhi uwumthombo wamanzi okuphila ahlala egeleza. Kusukeka ngesikhathi edala umhlaba, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi obandakanya ukubaluleka kokuphila, wenze umsebenzi omningi onika umuntu ukuphila, futhi wakhokha inani elikhulu ukuze umuntu aphinde abe nokuphila, ngoba uNkulunkulu Uqobo uwukuphila okungunaphakade, futhi uNkulunkulu Uqobo uyindlela umuntu avuswa ngayo. UNkulunkulu uhlala ekhona enhliziyweni yomuntu, futhi uphila phakathi komuntu ngaso sonke isikhathi. Nguye obeqhubekisa ukuphila komuntu, isisekelo sobukhona bomuntu, futhi utshale lukhulu ukuze umuntu aphile emuva kokuzalwa. Wenza umuntu azalwe kabusha, futhi wenza akwazi ukuphila endimeni nendima okumele abe kuyo. Sibonga amandla Akhe, kanye namandla Akhe okuphila angeshatshalaliswe, umuntu uphile izizukulwane eziningi, kukho konke amandla kaNkulunkulu yiwo akade enza ukuthi umuntu aqhubeke nokuba khona, futhi uNkulunkulu ukhokhe inani umuntu ojwayelekile angakaze alikhokhe. Amandla empilo kaNkulunkulu angachuma kunanoma amaphi amandla, phezu kwalokho, edlula wonke amandla. Ukuphila Kwakhe kungunaphakade, amandla Akhe makhulu ngokwedlulele, futhi amandla Akhe okuphila awanakwehlulwa yinoma yini edaliwe noma amandla esitha. Amandla kaNkulunkulu akhona, futhi akhanyisa bha, noma ngabe yisiphi isikhathi noma indawo. Izulu nomhlaba kungaba nezinguquko ezinkulu, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kufana. Zonke izinto ziyedlula, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kulokhu kumile, ngoba uNkulunkulu ungumthombo wobukhona bazo zonke izinto, futhi ungumsuka wobukhona bazo. Ukuphila komuntu kuvela kuNkulunkulu, izulu likhona ngenxa kaNkulunkulu, futhi ubukhona bomhlaba busuka emandleni okuphila kukaNkulunkulu. Akukho okubalulekile okungadlula ubukhulu bukaNkulunkulu, futhi akukho okunamandla okuphuma emandleni okuphathwa nguNkulunkulu. Ngale ndlela, ngisho noma bangobani, bonke abantu kumele bathobele ukubusa kukaNkulunkulu, bonke abantu kumele baphile ngaphansi kokulawulwa uNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongaphunyuka elulawuleni Kwakhe.
Okulandelayo: I. Amazwi Ngezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Wokusindisa Isintu